हामीसँग भएका सम्पूर्ण कुरा स्वर्गबाट आएका हुन्
दृष्टिकोण / बिचार
राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मत परिणाम छिट्टै आउने
गौचन र तिवारी हत्याका अभियुक्त पक्राउ
चुनावमा सहभागी हुन मतदाता आतुर
छिन्ताङवासी भन्छन्– ‘बाटो कालोपत्रे गर्नेलाई मत दिन्छौँ’
जनादेशलाई दराजमा थन्काउन पाइँदैन ः नेम्वाङ
गाउँपालिकामा बैंक नहँुदा तीन दिन हिँडेर सदरमुकाम धाउन बाध्य
धार्मिक स्वतन्त्रता र राजनीति
राष्ट्रिय टेबल टेनिस यसै साता
युवा बिकास बहुउद्देश्यीय सहकारीले शुरु गरयो इन्टरनेट बैकिङ्ग सेवा
एक अर्ब बढीको म्युचुअल फण्डको कारोबार हुँदै
Former Minister Ek Nath Dhakal laud reconciliation in the Middle East
International Conference on Advanced materials ( KaSAM-2016) in Pokhara, Nepal
मंगलबार निजी विद्यालय बन्द हुने
आर्थिक अनियमितताविरुद्ध विद्यार्थीद्वारा कलेजमा तालाबन्दी
मैले अवसर भेटे भने मुख्यमन्त्री त के प्रधानमन्त्री समेत सहज तरिकाले चलाउन सक्छु
नक्खु जेल विद्रोहलाई सफल बनाएका पौडेल बन्लान त मुख्यमन्त्री ?
माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार तय
शीतलहर प्रभावितलार्इ परिवार दलले कम्बल दिने
माइनस पाँच डिग्री तापक्रममा मतपेटिका कुर्दै दलका कार्यकर्ता
पुल बनेपछि एक घण्टाको बाटो पाँच मिनेटमा छोटियो
फूल्न त फूल्यो गुराँसै फूल्यो अफ्ठ्यारो भीरैमा गीतको म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक
सुन्दरीजल–पशुपतिमा ५० हजार बोलबम यात्री
डा. सन् म्योङ्ग मुनको आत्मवृत्तान्त
धार नलगाएको चक्कु भुत्ते हुँदै जान्छ
भय र प्रेरणाबीच
प्रताप स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार यज्ञ ढकाललाई
जित्ने र हार्ने सबै देशप्रति जिम्मेवार ः अध्यक्ष ढकाल
युबाहरुको मानसिकता फराकिलो हुनु पर्छ : पूर्व मन्त्रि ढकाल
समितिको विवादले करोडौँको खानेपानी योजना अवरुद्ध
प्रचण्डलाई ‘त्रिमूर्ति सम्मान’ र ‘सत्यमोहन जोशी शताब्दी पदक’ प्रदान गरिने
बेलायती राजकुमार ह्यारीको विवाह सुनिश्चित
वार्तामै नबस्ने साउदी अरेबियाको भनाई अतिवादी– कतार
एनपिएनओजीले सूचना प्रविधि सम्मेलन गर्ने
प्राकृतिक उत्पादनबारे कार्यशाला गोष्ठी
एक चौथाई मृत्यु वातावरणीय प्रदुषणबाट – विश्व स्वास्थ्य संगठन
आर्थिक र समावेशी विकास नयाँशक्तिको वैचारिक आधार ः डा भट्टराई
मानिसले भन्छन् कि म, विश्वका सबैभन्दा धनी मानिसमध्ये एउटा हुँ, तर तिनीहरूले के भनिरहेको छन् मलाई थाहा छैन । मैले जीवनभर निकै कडा मेहनत गरेको छु, तर मेरो नाममा एउटा घर पनि छैन । न त मेरी श्रीमती कै नाममा नै वा न मेरा छोराछोरीको नाममा नै मैले कुनै सम्पत्ती लुकाएको छु । मेरा सबै कुरा सार्वजनिक सम्पत्ति हुन् । हरेक कोरियाली वृद्धका हातमा सरकारी कागजात छन् र उनीहरू सरकारी निकायमा दर्ता गरिएका छन् । मेरो भने त्यस्तो आधिकारिक छाप भएको कागजात छैन ।
तपाइँ छक्क पर्न सक्नुहुन्छ कि, मैले अरूले खाँदा र सुत्दा पनि नखाइकन वा नसुतिकन त्यति कडा मेहनत गरेर मलाई के लाभ भयो होला । मैले धनी हुनकै लागि भनेर काम गरेको थिइनँ । पैसाले मेरा लागि केही अर्थ राख्दैन । मानवताका लागि खर्च नहुने वा गरिबीका कारण मृत्युसँग जुधिरहेका मेरा छिमेकीलाई सहयोग गर्नका लागि प्रयोग नहुने कुनै पनि रकम कागजको खोस्टा बराबर हो । कठिन काम गरेर आर्जित रकमलाई सदैव विश्वका हर प्राणी र प्रकृतिलाई प्रेम गर्नका लागि प्रयोग हुनुपर्दछ र त्यस्तो रकम विश्वलाई नै लाभ दिनसक्ने योजनामा खर्च गरिनुपर्दछ ।
विदेशमा अध्यात्मिक ज्ञान प्रचारकहरू पठाउँदा उनीहरूलाई मैले धेरै रकम दिने गरेको छैन । तैपनि उनीहरू जहाँ गए पनि बाँचेकै छन् । बाँच्नका लागि हामीलाई थोरै भए पनि पुग्छ । हामीसँग स्लिपिङ ब्याग छ भने हामीलाई कहीँ पनि सुत्नका लागि पर्याप्त हुन्छ । हामी कसरी बस्छौं भन्ने कुरा महत्वपूर्ण होइन, हामी कस्तो किसिमको जीवनयापनतर्फ उन्मुख छौं भन्ने हेरिनुपर्दछ । भौतिक सम्पन्नता नै खुसीका लागि शर्त हुन सक्दैन । “राम्रोसँग बाँच्नका लागि” भन्ने वाक्यांश भौतिक सम्पन्नताका सन्दर्भमा प्रयुक्त गरिएकामा मलाई दुःख लाग्छ । जीवन सहजरुपमा बाँच्नु भनेको अर्थपूर्ण जीवन बाँच्नु हो ।
म प्रार्थना सेवा वा विशेष समारोहमा मात्र टाई लगाउने गर्दछु । म सुट पनि प्रायः त्यति लगाउँदिन । म सामान्यतया घरमा बसेका बखत स्वेटर लगाउँछु । म कहिलकाँहि कल्पना गर्दछु, पश्चिमा समुदायमा टाईका लागि कति रकम खर्च हुँदो हो तिनीहरू धेरै महङ्गो हुनपर्दछन् । यदि हरेकले नेकटाई खरिद गर्न रोक्ने हो र त्यो रकम भोकबाट पीडा खप्न बाध्य हाम्रै छिमेकीका लागि खर्च गरिने हो भने यो विश्व बस्नका लागि अलिकति भए पनि राम्रो ठाउँ हुने थियो ।
अत्यन्त महंगा सामान हुनु त्यति राम्रो कुरा होइन । कल्पना गर्नुहोस्, घरमा आगलागी भयो भने के हुन्छ । को सबैभन्दा पहिले बाहिर निस्कन्छ म स्वेटरमा सजिएको व्यक्ति वा सुट र टाई लगाएको कोही ? म त बाहिर निस्कन हरदम तयारै हुन्छु ।
केही मानिसले सोच्न सक्छन्, म अत्यन्तै संरक्षणमुखी छु । म हरेक दिन नुहाउनु पर्दछ भन्ने पक्षमा छैन । हरेक तीन दिनमा एकपटक नुहाए पर्याप्त हुन्छ । म मेरा मोजा पनि दिनहुँ सफा गर्दिन । साँझपख, म मोजा फुकाल्छु र पछाडिको गोजीमा राख्छु ताकि अर्को दिन म त्यसलाई लगाउन सक्छु । होटलमा बसेको समयमा म बाथरुममा रहेको सबैभन्दा सानो टाबेल मात्र प्रयोग गर्दछु । शौचालयमा म तीन पटक पिसाब फेरेपछि मात्र पानी चलाउँछु । म तीन पटक दोबारेर एउटा मात्र ट्वाइलेट पेपर प्रयोग गर्दछु । यसका लागि तपाइँले मलाई असभ्य वा जङ्गली भने पनि मलाई त्यति फरक पर्दैन ।
खानाको समयमा पनि मेरा आकाङ्क्षा त्यति हुँदैनन् । मलाई धेरै तडकभडक खानामा रुचि छैन । मेरा अघिल्तिर सबै प्रकारका भव्य र विभिन्न किसिमका खानाका परिकार हुन सक्छन् तर मलाई तिनीहरूमा खासै अभिरुचि हुँदैन । म आफ्नो भातको कचौरा भरिभराउ भएको देख्न चाहन्न । मेरो कचौरामा पाँच भागको दुई भाग भए मलाई प्रशस्त हुन्छ ।
कोरियामा म सस्तो बजारबाट सबैभन्दा मनपर्ने जुत्तालाई ४९,००० वन (४० डलर) तिरेर किन्छु । हरेक दिन मैले लगाउने पाइन्ट पाँच वर्ष पुराना छन् । अमेरिकामा मलाई सबैभन्दा मन पर्ने खाना म्याकडोनाल्ड हो । केही मानिसले यसको खानालाई जङ्क फुड भन्छन् र यो खाँदैनन्, तर दुई कारणले मलाई म्याकडोनाल्डको खाना मन पर्छ । यो सस्तो छ र यसले समयको बचत गर्दछ । केटाकेटीलाई लिएर म खाना खान निस्किएँ भने म प्रायः म्याकडोनाल्ड नै पुग्छु । म म्याकडोनाल्ड गइरहन्छु भन्ने कुरा त्यो कम्पनीका मानिसलाई कसरी थाहा भयो मलाई थाहा छैन, तर अहिले हरेक नयाँ वर्षका दिन म्याकडोनाल्ड कर्पोरेसनका अध्यक्षले मलाई शुभकामना कार्ड पठाइरहन्छन् ।
हरेक वर्ष म आफ्ना सदस्यहरूलाई एउटा सन्देश दिने गरेको छु, त्यो हो “पैसा अत्यन्त होसियारीपूर्वक खर्च गर्नुहोस् र हरेक कुराको संरक्षण गर्नुहोस् ।” उनीहरूले पैसा बचत गरेर धनी हुनका लागि मैले यो भनिरहेको छैन । म उनीहरूमा संरक्षणको चेतना आओस् अनि देश र मानवतालाई बचाउन सकियोस् भन्ने चाहन्छु । यो विश्व छाडेका दिन हामीले केही लिएर जादैनौं । हरेकलाई यो कुरा थाहा छ, तर केही कारणवश मानिसहरूले जतिसक्दो बढी सामग्री आफ्नै हातमा परोस् भन्ने चाहनाबाट व्यग्र भइरहन्छन् । यो विश्व त्याग्नुअघि नै मेरो जीवनकालमा निर्माण गरिएका सबै कुरा जिम्मा लगाएर जाने योजना मेरो छ । स्वर्गीय अधिराज्यमा विशाल भण्डार छ, र त्यहाँ यो विश्वबाट केही पनि लिएर जानुपर्ने आवश्यकता छैन । हामीले अहिले बसिरहेको ठाउँभन्दा अझ राम्रो ठाउँमा हामी गइरहेको कुरा हामीलाई थाहा छ भने यो विश्वका सामानमा लिप्त हुनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन ।
कोरियामा एउटा गीत छ जुन म गाउँन निकै मन पराउँछु । हरेक कोरियालीले थाहा पाएको यो निकै पुरानो लोकप्रिय गीत हो । हरेक पटक मैले यो गीत गाउँदा मेरो हृदय शान्त हुन्छ, र मेरा आँखामा आँसु टलपल गर्दछ । यसले युवावस्थाको क्षणलाई सम्झना दिलाउँछ जुनबेला म घर नजिकको खेतमा त्यतिकै पल्टिरहेको हुन्थें ।
तिमीले भन्न सक्छौ, म तिमीलाई प्लाटिनम र मणिको मुकुट दिन्छु
तर मेरा लागि फोहोर लागेको र पसिनाले भिजेको कमिज नै मूल्यवान् छ ।
पवित्र हृदय मेरो शरीरमा तरङ्गित हुन्छ,
म विलो (बेतजस्तै बाँस)को पातबाट मुरली बनाउन सक्छु,
र भङेराहरू मसँग लय मिलाएर गाउँछन् ।
तिमीले भन्न सक्छौ, म तिमीलाई यो विश्व किन्न पुग्नेगरी सुन दिन्छु,
तर, मेरा लागि बाजराको खेत जोत्ने गोरु नै मूल्यवान् छन् ।
आशाको मुना मेरो शरीरमा अङ्कुरित भएको छ,
म खरायाहरूसँग निमग्न बात मार्न सक्छु, र आफ्नै तालमा खेलेर मेरा दिनहरू बित्दै जानेछन् ।
हाम्रा लागि खुसीले सदैव पर्खिबसेको हुन्छ । खुसी प्राप्त हुन नसक्नुको एउटै कारण छ, त्यो हाम्रो आफ्नै आकाङ्क्षाले मार्ग थुनिरहेकोले हो । हाम्रा आँखाहरू आकाङ्क्षामा केन्द्रित हुँदासम्म हामीले अनुसरण गर्नुपर्ने मार्ग देख्न सक्दैनौं । हामी हाम्रै नजिकका जमिनमा छरपस्ट सुनका टुक्रा खोज्न निकै प्रयत्न गर्दछौं जबकी हामी केही टाढा रहेको सुनको थुप्रो देख्न सक्दैनौं । हामीहरू हाम्रा गोजीमा सामान हाल्न व्यस्त हुन्छौं तर ती गोजीमा प्वाल रहेको कुरामा हाम्रो ध्यान जादैन ।
मैले ह्युङ्गनाम कारागारमा बस्दा कस्तो थियो भनेर बिर्सेको छैन । यो विश्वका सबैभन्दा डरलाग्दा स्थानहरू पनि ह्युङ्गनाम कारगारभन्दा निकै सुविधाजनक र भौतिक रुपमा सम्पन्न छन् । हरेक वस्तु ईश्वरमै निहित छ हामीहरू यसका क्षणिक रेखदेखकर्ता मात्र हौं ।
संविधानसभा निर्वाचन २०७०
हृदयको शान्त समुद्र
अरुलाई खाना दिँदाको खुशी
तिम्रो उद्देश्य पत्ता लगाऊ, जीवन परिवर्तन गर
रोटी दिनु भन्दा बनाउन सिकाउनु उत्तम
गरिबी र भोकमरीको समाधान
एउटा दुवी फूल सुनभन्दा मूल्यवान् हुन्छ
Weather of 2012-03-17 ( Saturday )
Times since April 06, 2011
© Copyright 2018, The Universal Times
Designed By: Peace Nepal DOT Com